The Proposal ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်​ထွက်​ဒရာမာဇာတ်​ကား​လေးတစ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​ ဇာတ်​ကားကြာမြင့်​ချိန်​က​ ၁နာရီ မိနစ်​​ ၄၀​ကျော်​ရှိပြီး Imdb rating 6.7/10 အထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားသူ​တွေက ​တော့ နာမည်​ကြီးမင်းသမီး Sandra Bullock.....မင်းသား Ryan Reynolds တို့ဖြစ်​ပါတယ်​ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းက​တော့ စာအုပ်​တိုက်​တစ်​ခုမှာ အယ်​ဒီတာချုပ်​ဖြစ်​တဲ့ Margret တစ်​​ယောက်​ ဗီဇာစည်းကမ်း​ဖောက်​လို့ ပြည်​နှင်​ဒဏ်​​အ​ပေးခံရမယ့်​အ​ခြေအ​နေဆိုက်​​နေပါတယ်​....သူ့အတွက်​​ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းက​တော့ နိုင်​ငံသားတစ်​​ယောက်​နဲ့လက်​ထပ်​တာပါ.... အဲဒီအခါ သူ့လက်​​ထောက်​ဖြစ်​တဲ့ Andrew နဲ့ လက်​ထပ်​ဖို့ကြံစည်​ပါ​တော့တယ်​..... ဒါပေမယ့်လည်း အ​မေရိကန်​လူဝင်​မှုကြီးကြပ်​​ရေးအရာရှိမှ သူတို့နှစ်​​ယောက်​​ပေါင်းလိမ်​​နေတယ်​လို့သံသယရှိလာတာ​ကြောင့်​ ၂​ယောက်​စလုံးကို​မေးခွန်း​တွေ​မေးမယ်​ မတူရင်​ Margret က နယ်​နှင်​ဒဏ်​ Andrew က​ငွေဒဏ်​နဲ့​ထောင်​ဒဏ်​ခံရမှာပါ.....Season2မှာပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှု့ကိုများစွာရရှိထားတဲ့ ဒီစီးရီးဟာ အခု Season3မှာဆိုရင်ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါပြီ... ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ မမတို့ ရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်းလေးတွေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးက မမ တို့ ရဲ့ သဘော သဘာဝတွေ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ တီဗီ ထုတ်လုပ်သူ ရှင်ဟေး အိမ်ထောင်သည် မီယွန်း နဲ့ တခုလပ် အမေ ဟေးယောင်တို့ အသက်၄၀ အရွယ် မမကြီးတွေပါ သူတို့ဟာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေအကြောင်းကို လက်ရှိခေတ် ဆိုးလ်ရဲ့ လူမှုဘ၀ နဲ့ ချိန်ထိုးပြီး နေ့တိုင်း သုံးသပ်နေကြသူတွေပါ ဒီဟာသ အချစ်ကားက ဒါရိုက်တာ Kwon Chil ရဲ့ နော်ကဆုံးပေါ် မိန်းမတွေရဲ့ relationship အပေါ်သဘောထားလေးတွေနဲ့ လိင်ကိစ္စတွေ အပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားတယ် ဘယ်လို လေးဆို နှစ်သက်တယ် ဆိုတာကို ဟာသလေးနှောပြီး ထိထိ မိမိ နဲ့ ရိုက်ကူးပြထားတာပါ ပညာ ယူမယ့်သူတွေကတော့ ကြည့်ကြပေါ့နော့ သိပ်အများကြီးပြောလိုက်ရင် ကြည့်တဲ့ အခါပေါ့သွားမှာစိုးလို့ သိပ်မညွှန်းတော့ပါဘူးဗျ စကားချပ် - တခါထဲ ...ဒါကြောင့် DC Fan များအနေနဲ့အကြိုက်တွေ့စေမယ့် စီးရီးတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး.. Ash တို့ပြန်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ယခင် Season ၂ခုမှာကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေရထားပြီး IMDb Ratin 8.5/10 ၊ Rotten Tomatos 99% အထိရရှိထားတဲ့ Comedy/Horror Series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Comedy/Horror ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကြည့်ရှုရတာ ရသတစ်မျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပြီး ယခင် Season ၂ခုကိုကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီ Season3မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၃၀က မကောင်းဆိုးဝါးကိုသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့လေးကနေ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းပေးပြီးနောက် အက်ရ်ှတစ်ယောက် ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့သူ့မြို့လေးမှာ ကုန်မာပစ္စည်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး စီးပွားရေးစတင်လုပ်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာလည်း အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အမှားတစ်ခုလုပ်မိရင် ပြန်ရောက်လာတတ်တာပဲမဟုတ်လား။ ဒီလိုနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် Book of The Dead ကိုရှာတွေ့မိသွားတဲ့နောက်တော့ အက်ရ်ှရဲ့အသည်းကျော်ကြီး ရူဘီပြန်လည်ရောက်ရှိ သောင်းကျန်းပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် လူလွတ်ကြီးလို့ထင်ရတဲ့အက်ရ်ှတစ်ယောက် ဒီလောက်နှစ်များစွာကြာမှ သူ့မှာသမီးရှိနေမှန်းသိလိုက်ရပြီး နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေပါရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အက်ရ်ှတို့တစ်သိုက် ဘယ်လို ပေါက်ကရလုပ်ပြီး ဟာသဖောက်သရဲနှိမ်နှင်းဦးမလဲ၊ မိသားစုပါပါဝင်လာတဲ့အတွက် ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲ၊ ရူဘီကရောဘယ်လိုပြန်လက်စားချေမလဲဆိုတာတော့ အခုထပ်ထွက်လာတဲ့ Season3မှာပဲဆက်လက် ...Shingကတော့ ငါးဖမ်းလှေတွေ အယောင်ပြပြီး ရွှေမှောင်ခို ရောင်းဝယ်နေသူပါ... တစ်နေ့မှာတော့ Shing တစ်ယောက် ရေအောက်က လျှို့ဝှက်ရွှေတွင်းကို လိုက်ရှာနေကြောင်း ပြည့်သူရဲကြီး Saigau သိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ သားကောင်နောက်ကို ဘယ်လို ခြေရာခံလိုက်လံဖမ်းဆီးမလဲ ဆိုတာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း အတိုက်အခိုက်ကားကောင်းမျိုးမှ ကြည့်ချင်တဲ့ Channel Myanmar ပရိသတ်ကြီးအတွက် The Brink (2017)ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် (ဘာသာပြန်သူကတော့ Ann Mary ပါ) File Size : (900 MB) and (376 MB) Quality : ...
၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက် အလန်းစား တမီလ်ကားလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ရှုပ်တွေ အရမ်းခေတ်စားတဲ့ ဘောလီးဝု၊ သောလီးဝု ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်စားကွက်တွေကို ဟော်ရာ(horror) ထည့်ရိုက်ထားတဲ့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဟော်ရာပေါင်းစပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့၊ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ...
TECHNOLOGY companies are losing no time after the world’s biggest smartphone trade show to ensure their plans to seize on fifth generation (5G) telecommunications opportunities are realised over the...
Since April 2006, our colorful Burmese Classic has already provided vivid vision images and illustration in Burmese Language.
ဒါကြောင့် အရင်တုန်းက အေးဆေးမကြည့်ခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ရော အားလပ်ချိန်လေးမှာ ဂျူမုံဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...အပိုင်း(၈၁)ပိုင်းရှိလို့ တစ်ပတ်ကို (၁၀)ပိုင်းခန့် တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်.....
File Size…(500 MB)@Episode Quality…450p Format…mp4 Duration… @ Episode Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Subtitled by Yangon Movie Store Encoder…Phyo Pyae Episode (1) Yoteshin Link / Openload Link / Solid Drive Link Episode (2) ...
Free sex slave cam chat 1 on 1 26-Dec-2018 11:38
filipino dating singles 10-Aug-2018 03:08
They have found their way into other niches such as the construction industry where they are used to move or propel construction equipment.
egypt dating girls 11-Jan-2019 00:25
Ghana adult webcam sites 20-Aug-2018 02:42
Femdom chat room no sign up 11-Jul-2018 03:06
During the end of the 18th and 19th centuries,aperiod known as the "Golden Age", the grammar, vocabulary and pronunciation of the Russian language was stabilized and standardized, and it became the nationwide literary language; meanwhile, Russia's world-famous literature flourished.
Free anal dating us 16-Jan-2019 17:23